विश्व Archives | Page 42 of 100 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
निःशुल्क ‘प्याड’ वितरण…
विन्डहोइक, (नामिबिया) । नामिबियाको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा बढ्ने बालिकाका लागि बुधबारदेखि निःशुल्क ‘सैनिटरी प्याड’ बाड्न थालेको छ । रजस्वलाको बखतमा बालिकाहरू विद्यालयमा उपस्थित नहुने... Read more
पाकिस्तानको लाहोरमा चिनियाँ मेट्रो रेल…
बेइजिङ । पाकिस्तानमा चीनले बनाएको मेट्रो रेल सार्वजनिक गरिएको छ । पाकिस्तानको लागि यो पहिलो मेट्रो रेल हो ।चीनले पहिलो चरणमा २७ वटा मेट्रो हस्तान्तरण गरेको हो । बाँकी बाँकी २६ वटा मेट्रो चाल... Read more
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई कुकुर उपहार…
पुटिनलाई तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति गुर्बांगुली बेर्दिमुखमेदोभले कुकुर उपहार दिएका हुन् । पुटिनसँगको भेटमा उनले कुकुर उपहार दिएका हुन् ।कुकुर बोक्दै पुटिनले तुर्कमेनिस्तानका समकक्षीलाई धन्य... Read more
कैदीहरुबीच झडप भएपछि…
मेक्सिको सिटी । मेक्सिकोको नुएभो लेओन राज्यमा रहेको एउटा कारागारमा कैदीहरूको दुई समूहबीच भएको विवादपछिको एक झडपमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । राज्यका सुरक्षा प्रवक्ता अल्डो फास्कीले... Read more
भियतनाममा भीषण वर्षा…
हनोई । भियतनामको उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परी कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सरकारी अधिकारीले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार पाँच जना घाइते भएका छन् भने... Read more
स्वतन्त्रता घोषणा गरेको हो कि होइन, स्पष्ट गर्नु — स्पेन सरकार…
म्याड्रिड । क्याटालोनियाको क्षेत्रीय सरकारले उक्त राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो कि होइन जवाफ दिन उक्त राज्य सरकारलाई आदेश गरेको छ । स्पेनको मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकपछि स्... Read more
हथाैडाले एटीएम फुटाउँदै गर्दा प्रहरी पुगेपछि…(भिडियो)
– सत्यसमाचारबाट साभार Read more
किन झगडा गरिरहेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका श्रीमतीहरु ???
आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका कारण चर्चामा रहने अमेरिकी राष्ट्रपति पछिल्लो पटक आफ्ना श्रीमतिहरुका कारण चर्चामा रहेका छन् । पुर्व पत्नीले आफु फस्ट लेडी भएको बताएपछि विवाद चुलिएको हो । ट्रम्पकी प... Read more
अपराधिक गतिविधिको केन्द्र थियो सिड्नी, जान्नुहोस् सिड्नीका अचम्म लाग्दो तथ्य…
सिड्नी । सिड्नी अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहर मात्र होइन, यो देशकै अर्थतन्त्रको केन्द्र पनि हो । सिड्नी सभ्य र व्यवस्थित छ । यहाँ सरकारले तोकेको नियम कानुन कडा रुपमा कार्यन्वयन हुन्छन् र ग... Read more
नरेन्द्र मोदीसँग विवाह गर्न चाहने यी महिला को हुन त ???
मानिसहरुको इच्छा पनि अचम्म-अचमका हुन्छन्। यस्तै एक महिलाको इच्छा पनि गजबको रहेको छ । भारतको राजस्थान-जयपुरमा बसोबास गर्ने ओमशान्ति शर्मा नाम गरेकी महिलाको पीएम नरेन्द्र मोदीसँग बिवाह गर्ने... Read more